China Yakabikwa Nyama Inodziya Inotonhorera vagadziri uye vanotengesa | ALLCOLD
Yakabikwa Nyama Inodziya Inotonhorera
Vacuum Nzvimbo ndiyo inokurumidza kubuda semhepo kutonhora tekinoroji. Iyo inoderedza kumanikidzwa kwekamuri kuburikidza nekupombi kwevhavha kuitira kuti nzvimbo yekubikira yemvura mune zvigadzirwa igodzikiswa kuti mvura ive nemhepo kupinza zvigadzirwa ivo pachavo 'kupisa, zvadaro kudzikisa zvigadzirwa'
tembiricha nekukurumidza. Pane zvakawanda zvakanakira pamusoro pechinyakare kutonhodza uye kutonhorera mufiriji imba.
Inokurumidza kutonhora kumhanya, Izvo zvinongotora kutenderera maminetsi makumi matatu kutonhorera kubva ku100 ℃ kudzika kupfuura 10 ℃. Yunifomu inotonhora tembiricha iri pakati uye pamusoro pechikafu. Hapana chakakosha chinodiwa pahukuru, chitarisiko uye stack modhi yezvigadzirwa HAPANA "yechipiri kusvibiswa" kwekutonhora mune yakazara-yakasarudzika isina simbi kamuri. Kurumidza kuyambuka tembiricha renji ye25-50 ℃
inoenderana chaizvo nerudzi rwehutachiona.
AllCOLD yekuzorora inotonhorera ikozvino inoshandiswa zvakanyanya mukutonhodza kwemaindasitiri ezvikafu zvakabikwa senge kutonhorera kwenyama, huku, mupunga uye bhinzi zvigadzirwa zvakagadzirwa, muriwo, chingwa, keke nezvimwe. Normal tembiricha akateedzana kutonhorera chikafu kune dzakapoteredza 25 ℃ ~ 30 ℃, yakaderera tembiricha akateedzana kune yekupedzisira tembiricha inogona kudzikira kupfuura 10 ℃.
1. Unyanzvi hwePCM hwakakosha hunogamuchirwa mumusungo unotonhora, kuvandudza zvakanyanya kugona kwekukweva kwemvura kupokana nekuparadza kune firiji uye yekutsvaira system kubva pakukoromoka kwemhepo yakawanda yezvikafu zvakabikwa.
2. Weldless Stainless simbi chubhu dhizaini inogamuchirwa mune inotonhora musungo yekuvandudza yakavimbika makiyi ezvikamu anozivikanwa epasi rese mabrandi.
3. Yakakosha vharuvhu yekumanikidza yekudzora tekinoroji kugadzirisa kupaza kwekunetseka mukutonhodza kwemvura zvigadzirwa neepamberi PLC uye inobata skrini system, Chiratidzo chinoratidza mashandiro uye chinzvimbo chinomhanya, chakajeka uye chiri nyore.
4 Hierarchical mashandiro uye cryptoguard inogamuchirwa mune yekushandisa mashandiro:
Anoshanda mushandi: chete kumakanika keystroke (on / off)
Kugadzira tekinoroji: chete kwekumisikidza kwekugadzirisa parameter.
Injiniya: yezvigadziriso zvekugadzirisa, kugadzirisa uye kukanganisa kuongororwa.
5. otomatiki uye echinyorwa mashandiro sisitimu, kumhanya uye mashandiro emuchina zvinowedzerana uye zvakavimbika.
6. Izvo zvinhu zveWacuum chamer iSUS304 simbi isina simbi, yakagadzirirwa maererano nezvinodiwa neGMP.
Vacuum Inotonhorera Models & Magadzirirwo:
Pashure: Steamed Foods Vacuum Nzvimbo